LG G30 အတွက် Sensational Rom Evomagix Stock 2E ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, ရွမ်, Android ဗားရှင်း
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ၊ Android စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများအချိန်ကြာမြင့်စွာစတင်ခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး terminal ဖြစ်သော Roms နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ပတ်ကြသည်။ ငါတို့ဘယ်လောက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာပြောနေတာလဲ LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ် ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ LG G2 model D802 လို့လူသိများတဲ့အတွက်အခုလာမယ့်ဖုန်းကိုငါပြမယ် Stock 30E ကို အခြေခံ၍ ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံး Lollipop Rom ဖြစ်သည်LG G2 အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် firmware ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Rom သည် Evomagix ၏ယခုဒုတိယအသံထွက်တွင်အခြားအရာများမဟုတ်ပါ Rom Evomagix စတော့အိတ် 30Eတရားဝင်ပစ္စည်း LG ကိုအခြေခံပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Evomagix အဖွဲ့မှ Rom Lolliipop နောက်ဆုံးပေါ် Rom Lolliipop သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အတူ ဇာတိ LG အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးကိုထည့်သွင်းပါ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ terminal ၏မည်သည့်ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
1 Rom Evomagix Stock 30E ၏အင်္ဂါရပ်များ
2 Rom Evomagix Stock 30E ကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
3 Evomagix Stock 30E Rom ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
4 မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သောနည်းလမ်း Evomagix Stock 30E rom
Rom Evomagix Stock 30E ၏အင်္ဂါရပ်များ
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ LG G30 အတွက် Rom Evomagix Stock 2Eနိုင်ငံတကာစံပြမော်ဒယ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းအပြင်၊ D802, ထို့အပြင် D805 နှင့် D806 မော်ဒယ်များအပေါ် flashed နိုင်ပါသည် Rom ရှိသည့် Aroma installer မှ LG G2 ၏မှန်ကန်သောမော်ဒယ်ကိုသာရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းပြီးအပြည့်အဝဂရပ်ဖစ် Rom ထည့်သွင်းမှုအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့် application များနှင့် mods များကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ချင်သည်ကိုရွေးချယ်ခွင့်လည်းပေးသည်။ Rom တူညီတဲ့ Rom installation လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ install လုပ်ပါ။
အ ရောမ၏အဓိကလက္ခဏာများ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ROMs နှင့် MOD များအတွက် Aroma Installer နှင့်စာရေးသူ
အခြေပြု Lollipop 5.0.2 ။ V30E
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု၊ ဘက်ထရီစတာတွေပါ နေပြည်တော်
MagixRom ထိန်းချုပ်မှု (Ota၊ မီးဖိုချောင်၊ နောက်ခံပုံ၊ ပြန်လည်စတင်ရန်ခလုတ်များ၊ ပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း)
default အ 48 သို့ကျဆင်းလာအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာသော့။ (Aroma Installer မှပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း).
ကုမ္ပဏီရဲ့ App မပါဘဲ။
LG Apps အားလုံး
Rom Evomagix Stock 30E ကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
ဒီတပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အကောင့်ထဲသို့ယူရန်လိုအပ်ချက်များ စိတ်လှုပ်ရှား Rom Evomagix စတော့အိတ် 30E အောက်ပါအချက်များကိုလာ
တစ်ဦးရှိ LG က G2, ပုံစံများ D802, D805 သို့မဟုတ် D806
Terminal ကိုအဆင်ပြေပါစေ အမြစ်တွယ် နှင့်ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏အပိုင်၌ TWRP သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းကိုတိုးမြှင့်ခံရပြီးကတည်းကဖြစ်သည်.
တစ်ဦးရှိ nandroid အရန်သိမ်းခြင်း။ ကိုယ့်အမှု၌အကြှနျုပျတို့၏တစ်ခုလုံးကို operating system ကို၏။
တစ်ဦးရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာများနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအရန်ကူးခြင်း အဖြစ် Rom ကို Flash လုပ်တဲ့အခါ terminal တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပစ်တော့မယ်.
Settings ထဲမှ USB debugging ကို enable လုပ်ပါ။
Evomagix Stock 30E Rom ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
လိုအပ်သောဖိုင်များကို Zip format ဖြင့်ချုံ့ထားသောဖိုင်တစ်ခုတည်းသာကန့်သတ်ထားသည် 1,60Gbတစ် ဦး မှလာသူမည်သူမဆိုပေမယ့် Rom Stock Jelly Beam၊ Kit Kat သို့မဟုတ် Rom AOSP အမျိုးအစားများ ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းရန်လည်းလိုအပ်သည် Bootloader Kit Kat.
Rom Evomagix စတော့အိတ် 30E Volume 2
Bootloader Kit Katအကယ်၍ သင်သည် Stock Jelly Beam၊ Kit Kat သို့မဟုတ် AOSP ဗားရှင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်လျှင်လိုအပ်သည်။
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သောနည်းလမ်း Evomagix Stock 30E rom
လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနှင့်ပြီးတာနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် USB OTG မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ရန် USB သို့ကူးယူပါLG G2 ကိုလုံးဝပိတ်ပြီးပြန်လည်စတင်တော့မည်။ သို့သော် Rom Evomagix Stock 30E တပ်ဆင်မှုကိုပြန်လည်ရယူရန် Recovery mode တွင်: (ဤပိုစတာ၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ပူးတွဲပါသောဗီဒီယိုတွင်၊ Evomagix Stock 30E Rom ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်၊ Rom ထည့်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်လည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်).
Wipe option ကိုသွားပြီး Wipes အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပါမယ် Rom တစ်သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်သည်။ အကယ်၍ သင် Rom ကို LG G2 ၏ internal memory ထဲသို့ကူးယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ထားပါက internal memory ကို Wipe မလုပ်သင့်ပါက Rom zip ကိုသင်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install ပြီးတော့ငါတို့ install လုပ်ခဲ့တယ် Bootloader Kit Kat. (သင် Rom Stock Lollipop မှလာလျှင်မလိုအပ်ပါ).
ကျနော်တို့ option ကိုပြန်သွားပါ Install ငါတို့ Rom ၏ Zip ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဤအချိန်တွင် Aroma installer ပွင့်လာမည်၊ ၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသည့် LG G2 model ကိုရွေးချယ်ရလိမ့်မည်၊ navigation bar ၏အရွယ်အစားသို့မဟုတ် LG G2 ၏ volume level ကိုပင်ရွေးရလိမ့်မည်။
Rom မှတဆင့် Aroma မှတဆင့်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် LG G2 ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ရန်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့နိုင်အောင် Restart system box ကိုသာစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom Lollipop.
သငျသညျပိုမိုအသေးစိတ်ချင်လျှင်သို့မဟုတ် Rom အကြောင်းကိုတစ်ခုခုသိလိုလျှင်, တွန့်ဆုတ်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဘူး HTC Mania တရားဝင်ချည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » စိတ်လှုပ်ရှား !! LG G30 အတွက် Rom Evomagix Stock 2E တရားဝင် Lollipop !!
အလက်ဇန်းဒါး Cardona ဟုသူကပြောသည်
ဤသည် rom အချိန်ကြာမြင့်စွာပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့အဲဒါအရမ်းကောင်းပါတယ်
အလက်ဇန်းဒါး Cardona မှပြန်ကြားချက်
htcmania တွင် quetzal rom 1.3 သည်သင် ANDROIDSIS ကိုမစမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ LG G2 (နိုင်ငံတကာ)
ဒီလင့်ခ်ကမဖွင့်ဘူး၊ Google ကစာမျက်နှာကိုဖွင့်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်
ချစ်ခင်ရပါသောမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ROM ကိုမဝံ့ဝံ့ပါ။ အကြောင်းမှာအခြား terminal တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား service provider ကိုမယူတော့ဘဲကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲကျန်ရစ်ခဲ့သည် ဆဲလ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ။
ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီ installation ကိုလုပ်တဲ့အခါ G2 သို့မသွားစေရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာပါ။
Eduardo Miranda ဟုသူကပြောသည်
Francisco G, D2 မှာဒီ rom ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပေမဲ့လည်း lg လိုဂိုမှာအမြဲတမ်းရှိနေပြီး d805 ကိုတော့ရွေးလိုက်ရင်ပဲ။ LGflash tool တွင် stok rom ကို flash လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည် D805 rom မှလာသည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။
Eduardo Miranda သို့ပြန်သွားပါ
အမြစ်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ငါစတော့ရှယ်ယာ Lollipop ပေါ်မှာရှိ၏နှင့်အမြစ်တွယ်ဖို့လမ်းမရှိသောကြောင့်, အဘယ်သူမျှမနည်းလမ်းငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်၎င်းသည် d806 ဖြစ်ပါတယ်
rom ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် lollipop baseband ကိုကြိုးစားတပ်ဆင်ပါ။ reboot စစ်ဆေးမှုကိုဖြုတ်လိုက်ပါ၊ baseband ကို install လုပ်ပြီး system ကို reboot လုပ်ပါ။ ခင်ဗျားအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Manuel ကောဘယ်လိုလဲ။ lg flash tool နဲ့အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပါ။ ဒါဆို root လုပ်လို့ရပြီ
ဒီ rom ကို install လုပ်ကတည်းကငါ clash clan များသို့မဟုတ် supercell တစ်ခုခုကို install မလုပ်နိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီအကြောင်းတစ်ခုခုသိလား
Esteban Melgar Leon ဟုသူကပြောသည်
ငါ Rom ထည့်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်လိုဂိုထက်မပိုပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
Esteban melgar leon အားပြန်ပြောပါ
အညိုရောင် ale ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ... Rom ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့်တင်ထားနိုင်ပါသလား။ ငါ့မှာအကြီးစားအကောင့်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ale moreno အားပြန်ပြောပါ
Fallout Shelter ကို Android တွင်သြဂုတ်လတွင်ဖြန့်ချိမည်
Androidsis လက်ဆောင်အသစ်ဖြင့် RHA MA750i နားကြပ်ကိုအနိုင်ယူပါ